Glọ ọrụ 25G Series | China 25G usoro ndị na-emepụta, ndị na-eweta ya
25Gb / s SFP28 CWDM 40km DDM EML Duplex LC transceiver optical
Ezubere transfeivers SFP28 maka iji ya na njikọ Ethernet ruo 25.78 Gb / s ọnụego data na 40KM njikọ ogologo. Ha kwadoro SFF-8472, ma dakọtara na SFF-8432 na akụkụ ndị bara uru nke SFF-8431. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
25Gb / s SFP28 LAN-WDM 10km DDM EML Duplex LC ngwa ntanetị transceiver
SFP28 LAN-WDM Module kwekọrọ na SFF-8431, SFF-8432 na IEEE 802.3CC 25GBASE-ER. A na-enweta ọrụ nyocha nchọpụta dijitalụ site na ntanetị ntanetị 2-waya, dịka akọwapụtara na SFF-8472. Igwe nyocha anya na-akwado ihe RoHS chọrọ.
25Gb / s SFP28 LAN-WDM 40km DDM EML Duplex LC nyocha transceiver optical
25Gb / s SFP28 CWDM 10km DDM EML Duplex LC nyocha transpeiver optical
Ezubere transfeivers SFP28 ka eji ya mee ihe na njikọ Ethernet ruo ọnụọgụ data 25.78 Gb / s na 10km njikọ ogologo. Ha kwadoro SFF-8472, ma dakọtara na SFF-8432 na akụkụ ndị bara uru nke SFF-8431. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.